थाहा छ ? यस्तो ‘नाइटो’ भएका महिला हुन्छन् भयंकर भाग्यमानी – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/थाहा छ ? यस्तो ‘नाइटो’ भएका महिला हुन्छन् भयंकर भाग्यमानी
महिलाको सुन्दरतामा मात्र होइन समुन्द्र शास्त्रमा पनि निक्कै महत्व छ ना इटो अर्थात नाभीको । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार मानिसको बोली चाली र ब्यबहारबाट समेत थाहा नपाएको कुरा नाभीबाट थाहा हुन्छ ।समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीको नाभी लामो र अनियमित हुन्छ त्यस्ता स्त्रीमा आत्म विश्वास बढी हुन्छ ।
– जुन स्त्रीका आँखा मृगनयनी र सेतो भागको अन्तमा रातो लागेको हुन्छ, त्यस्ता युवती अत्यन्तै भाग्यशाली र सुखभोग गर्ने हुन्छन्। – जसको जि ब्रो रातो र कमलो हुन्छ । यस्ता युवती आफू सुखभोग गर्ने र परिवारलाई पनि सुख दिने खालका हुन्छन् । – जुन स्त्रीको ना इटो गहिरो र भित्रबाट उठेको हुँदैंन्, त्यस्ता युवतीहरुको जीवन सुखमय हुन्छ ।
-नाकको अग्रभागमा कोठी हुने युवती धन भरिपूर्ण हुन्छन् । उनीहरु धनमान्य जीवन जीउछन् । -युवतीको पैतालामा कमलको चक्र र शंखको चिन्ह हुनुलाई एकदमै शुभ मानिन्छ । यस्ता युवतीका श्रीमान उच्च अधिकारी, ठूला
-जुन युवतीको बुढी औंला सर्प आकारको हुन्छ त्यस्ता युवतीहरु धनी हुन्छन् । – पैतालामा त्रिकोणको चिन्ह भएका युवतीहरु चतुर हुन्छन् । यिनीहरु आफ्नो बुद्धि र समझदारीले परिवारलाई खुशीसाथ राख्छन् ।
– नाइ टोको तल कोठी हुने युवतीहरु भाग्यमानी र पूरा जीवन सुखका साथ बिताउने मानिन्छ । – समुन्द्रशास्त्रकाअनुसार जुन युवतीहरुको बुढी औला उठेको हुन्छ वा गोलो अथवा रातो हुन्छ त्यस्ता युवतीहरु अत्यन्त भाग्यशाली हुन्छन् । यदि बुढी औला लामो भएमा जीवनमा धेरै कष्टको समान गर्नुपर्ने मानिन्छ ।